HomeTURKEYTurkish Aegean09 AydinKooxda Caruurta ee Waddooyinka Tareenka ayaa ku urursaday matxafka tareenka ee Camlik
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 09 Aydin, tareenka, Turkish Aegean, SAWIRADA, GUUD, Headline, TURKEY 0
kooxda carruurta tareenka ayaa ku kulmay madxafka tareenka ee masaajidka
xubno badan Demiryolc Children Group Turkiga kaga keceen oo gobolladii badan, magaalada Selcuk Aydin kulmay museum tareenka ee summerhouse magaalada ka.
Ku dhawaad ​​200 dadka ka mid ah Kooxda 'The Railroad Children Group', oo ay ka sameysteen warbaahinta bulshada, ayaa ku kulmay Museumamlık Steam Locomotive Museum waxayna ka qaateen sawiro xusuus leh oo ay ku aaseen aabayaashood iyo xaasaskooda ku dhawaad ​​40 sano ka hor.
Dadka 200 oo ka kala yimid gobollada Afyonkarahisar, İzmir, Uşak, Zonguldak, Konya iyo Kayseri ayaa ka qeybgalay kulanka quraacda ee ay qabanqaabiyeen aasaasayaashii kooxda Serkan Basavul iyo asxaabtiisa. Ku dhawaad ​​40 sano ka hor, kaqeybgalayaashu waxay sheekadooda u sheegteen midba midka kale in ay ku soo koreen tareennada xarunta saldhigga ku yaal. Dib-u-soo-nooleynta xusuusta xubnaha kooxda, marmarka qaarkood waxay sababaan daqiiqado shucuureed. Maamulaha kooxda, Serkan Basavul ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku yiri: “Waxaan aasaasnay ​​kooxdan si aabayaashood, xaasaskooda, howlgabnimada ah, Kooxaha Raheerka Caruurta ee dhintay ay u kulmaan waqti ka waqti. Sababta oo ah tareenku isu soo baxo waa jacayl, xirfad doonaysa allabaryo. In kasta oo aabbahood ka shaqeynayay saldhigyada fog ee Anatolia, saaxiibbadaa waxay ku soo koreen dhibaatooyin la mid ah saldhigyadaas waxayna ku haysteen dhibaatooyin xagga dugsiga ah. Waxay ku noolaayeen saldhigga saldhigga xaaladaha adag ee xilliga qaboobaha. Midkasta taariikh nololeedkiisa way ka duwan tahay. Waxaan la kulannaa dhowr jeer sanadkii, waana ku faraxsanahay. ”
Sheekada Tareenka: Nolosha Rugaha Qabow 08 / 05 / 2013 Nolosha Rugaha Qabow Sidii subaxa subaxdii, qabowgu wuxuu ku bilaabmaa saacado dheeraad ah oo u dhexeeya biraha birta. Masaafada u dhexeysa mugdiga 20 maalin kasta ilaa fiidkii. Jidka tareenka waa hanti magaalo oo ku yaal gobollo badan oo leh qaybo 10-15. Gawaarida tareenada ee ilaaliya aagga uu masuul ka yahay maalin kasta tallaabooyin culus, waa in ay eegaan haynta. Mustafa Dogan (1975), oo bilaabay inuu u shaqeeyo shaqaale ka tirsan Dawlada Dhexe (FDY) ee 57, wuxuu ka mid ahaa ilaalada tareenada. Full mas'uul ka yahay hubinta aagga labaatan sannadood, ilaa jawi dhulka ee u safri doona laba jeer socday 85 kun oo kiiloomitir. Asik Veysel "Waxaan ku jiraa waddo khafiif ah, waxaan aadayaa habeen iyo maalin", sida hadalladeeda ...
TCDD iyo Tareenada Tareenka Taaban Kulanka Wadatashiga 22 / 04 / 2019 Tareennada State Turkish TCDD General Directorate of Gaadiidka iyo Wadayaasha tareen tareenka kulmay tashiga qolka shirka. Agaasimaha shirka General TCDD Ali illayn ku haboon, Agaasimaha TCDD General xigeenka Ismail H. Murtazaoğlu, Manager Gaadiidka General TCDD Erol Arikan, TCDD-xigeenka Agaasimaha Guud ee Gaadiidka Cetin Altun, wadada Tareenka Association Gaadiidka Agaasimaha Guud ee Yasar oo ku biiray Agaasimaha Maamulka ee ganacsiga gaarka loo leeyahay ku hawlan hawlaha tareenka ee shirkadda. Hagaajinta hawlgallada tareenka iyo shirka qiimaynta dhibaatooyinka soo food by daneeyayaasha waaxda, TCDD General Director Ali illayn Madaxtooyada ayaa ku haboon. "Dhamaan dhibaatadaada Contact Qofka Mid ka mid ah Us" isuduwidda si fiican ula shaqeeya tareenka TCDD Railway ...
Maanta taariikhda: 2 Agoosto 1991 Buugga Muusikada Buurhanka ee Boostada La Furay 02 / 08 / 2015 Maanta, 2 August August 1914 waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay abaabul guud, ka dibna Agaasimaha Guud ee Railroad Railways ayaa xaday tareenada Faransiiska iyo Ingiriiska. Shirkadaha Jarmalka iyo Austria ayaa sii waday. Hicaz Railways ayaa sidoo kale ku hoos nool xukunka millatariga. Intii uu socdey dagaalka, tareemada ayaa la xidhay gaadiidka dadwaynaha oo aan xajin karin. 2 August 1944 Law No. 20 oo ku saabsan 4643 million credit si loo dhiso waddooyinka tareenka ilaa Ciraaq iyo xuduudka Iran. 2 Agoosto 1991 Laamiyada Buuggan ee Buurcada Iskuulada ee Furiinka ayaa furmay.
Isku-Duullada Beerta Bukaanka ee Boorama (Video iyo Sawir) 01 / 12 / 2012 Mushaarada Bukaanka ee Beerta Bukaanjiifka Tareenka Tareenka jidka matxafka loogu talagalay dadka jecel tareenka iyo tabboolada qaabka Selcuk (Izmir) oo ku saabsan 10km ka dib markaad tagto wadada tuulada ee Chamlik. Ka dib markaad tuulada soo gashid, waxaad arki kartaa saxeexa sawirada "Chamlik Steam Locomotive Museum" halkaasoo TCDD-yada loo yaqaan "tamphande steam turbo" lagu soo ururiyay dhinaca midig ee waddada hoos u dhigta iftiinka iftiinka. Matxafku ma muuqanayo marka la eego jihada hore iyo gudaha muraayadda, oo aan laga arki karin dibedda, waa wadada ugu weyn, ee aan wadada dhinaceeda ahayn. Ka soo horjeeda maleynimadayda, jawi wanaagsan oo lagu hayo iyo deegaan wacan ayaa la diyaariyaa, cagaarna ku wareegsan oo dhan. Matxafka, gaar ahaan musqulaha tareenada, tareenada, walxaha musqusha
Maanta taariikhda: 2 Agoosto 1991 Laamiyadda Buugaagta ee Buurada Buurada ayaa furan. 02 / 08 / 2013 Maanta, 2 August August 1914 waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay abaabul guud, ka dibna Agaasimaha Guud ee Railroad Railways ayaa xaday tareenada Faransiiska iyo Ingiriiska. Shirkadaha Jarmalka iyo Austria ayaa sii waday. Hicaz Railways ayaa sidoo kale ku hoos nool xukunka millatariga. Intii uu socdey dagaalka, tareemada ayaa la xidhay gaadiidka dadwaynaha oo aan xajin karin. 2 1944 20 4643 ee 2 million credit si loo dhiso jidadka tareenka ilaa Ciraaq iyo xadka Iran. 1991 Agoosto XNUMX Laamiyada Buuggan ee Buurcada Iskuulada ee Furiinka ayaa furmay.
Sheekada Tareenka: Nolosha Rugaha Qabow
TCDD iyo Tareenada Tareenka Taaban Kulanka Wadatashiga
Maanta taariikhda: 2 Agoosto 1991 Buugga Muusikada Buurhanka ee Boostada La Furay
Isku-Duullada Beerta Bukaanka ee Boorama (Video iyo Sawir)
Maanta taariikhda: 2 Agoosto 1991 Laamiyadda Buugaagta ee Buurada Buurada ayaa furan.
Matxafka Beerta ee Boosteej
Danta weyn ee Muhiimka ah ee Matxafka Aagga ee Beesha Haweenka ee Open Air
Maanta taariikhda: 2 Agoosto 1991 Cimilada Buurada Boostada ee Camlik ...
Maanta taariikhda: 2 Agoosto 1991 Xarunta Muusikada Buurcada